လှိုင်သာယာ နဝဒေးအိမ်ရာတွင် နိုင်ငံခြားသား ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမွေးထားသည့် ဝက်ဝံနှစ်ကောင်ေ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် နဝဒေးအိမ်ရာတွင် နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားဇနီးမောင်နှံ (စင်ကာပူနှင့် တရုတ်)တို့သည် အသက်လေး နှစ်ကျော်ရှိ ဝက်ဝံစုံတွဲအား မွေး မြူထားကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်၏ သတင်းပေးချက်အရ အိမ်ရာလုံခြုံ ရေးမှသိရှိ၍ တာဝန်ရှိသူတို့နှင့်ကြည့် ရှုစစ်ဆေးရာ သစ်တောဥပဒေနှင့်ငြိ စွန်းသည့်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချသော နေရာသို့ပြန်လွှတ်နိုင်ရန် အင်းစိန်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တင်ပြဆောင် ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မတ် ၁၈ ရက်တွင် နဝဒေး အိမ်ရာ နေအိမ်တစ်အိမ်သို့ သစ် တောဦးစီးဌာနနှင့် အိမ်ရာမှတာဝန် ရှိသူများ နိုင်ငံခြားသားဇနီးမောင် နှံနှင့်တွေ့ဆုံ၍ ဝက်ဝံနှစ်ကောင် ရောက်ရှိလာပုံကိုမေးမြန်း၍ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသူဖြစ်သော Mrs. Shwa Fang Wis က ”စားသောက်ဆိုင်ကို လာရောင်းတာမြင်လို့ သနားတဲ့အတွက် ဝယ်ပြီးမွေးထားတာပါ။ အထီးတစ်ကောင်၊ အမတစ်ကောင်ပါ။ ဝယ်လာစဉ်က တစ်နှစ်သားနီးပါးပဲ ရှိဦးမယ်။အခုလေးနှစ်သားကျော်ရှိပြီ။ တာ ဝန်ရှိသူတွေကို လွှဲပြောင်းပေးမှာ ပါ”ဟုပြောသည်။ အဆိုပါ ဝက်ဝံနှစ်ကောင် အားသံဆန်ခါလှောင်အိမ်ဖြင့် နေအိမ်ဝင်းအတွင်း မွေးမြူထားပြီး ထမင်းဟင်းနှင့် အသီးအရွက်ကျွေး ကြောင်းသိရကာ နဝဒေးအိမ်ရာဝင်းအတွင်း အများပြည်သူရေကူး သောရေကူးကန်နှင့် ဘောလုံးကွင်း ရှိသောကြောင့် အကယ်၍လွတ်သွားပါက အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရ၍ ပြည်သူမှသတင်းပေးမှုကြောင့် အိမ် ပိုင်ရှင်များအသင်းစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် အချိန်မီ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အင်းစိန် သစ်တောဦးစီးဌာနက၁၈ရက်နဲ့ ၂ဝ ရက်လာပြီးစစ် ဆေးတယ်။ ပြန်လွှတ်ဖို့ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။ အခန့်မသင့်လို့လွတ်သွားရင် အိမ်ရာဝင်းမှာ နေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေနေထိုင်တာများတော့ အချို့အရာ တွေကျွန်တော်တို့ မသိတာလည်းရှိတယ်။ သူတို့မွေးထားတာနှစ်ချီကြာတာမသိကြဘူး။ သတင်းရရ ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ အိမ်ရာမှာနေထိုင်တဲ့ သူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိတာတော့အမှန်ပဲ”ဟုနဝဒေးအိမ်ပိုင်ရှင်များအသင်းမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းထွန်းက မတ် ၂၁ ရက်တွင် ပြောသည်။
”သူတို့ကို လွှတ်တဲ့အခါမှာလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိအောင်ဦးစီးရုံး ချုပ်ကိုတင်ပြထားပါတယ်။တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရှည်မှာသူတို့ထိန်းဖို့ မလွယ်သလိုဥပဒေအရ မွေးခွင့်လည်းမရှိဘူး။ ဘယ်နေရာကိုလွှတ်မယ်ဆိုတာ အမိန့်စောင့်နေပါတယ်။ မင်္ဂလာဒုံမှာလည်း ဝက်ဝံတစ်ကောင် မွေးထားလို့ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို ပြန်လွှတ်တာတော့ ရှိဖူးတယ်”ဟု အင်းစိန်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီး အရာရှိ ဦးဖိုးလတ်က မတ် ၂၁ ရက်တွင် ပြောသည်။ အဆိုပါလေးနှစ်ကျော် အရွယ်ရှိ ဝက်ဝံစုံတွဲအား ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီးအရှေ့ဘက်ခြမ်း ကျောက်ကြီး မြို့နယ်ရှိ ဇာမဏီဘေးမဲ့တောသို့ ပို့ဆောင်ရန် သစ်တောဦးစီးဌာန မှ စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အင်းစိန်သစ် တောဦးစီးဌာနမှ တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညောင်ရွာ၌ အိမ် ၇ဝ ခန့် မီးလောင်
ခရီးသွားနေရာသစ် ဖော်ဆောင်ရေး အင်းတော်ရှိ ဂျပန်မြေအောက် စစ်ဆေးရုံကြီးကို တူးဖော်မည်
ဘင်္ဂါလီများအား NVC ကတ်ထုတ်ပေးမှု စစ်တွေမြို့ခံ ၁ဝဝ ခန့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်
ငပလီ ကမ်းခြေလှပမှု အာရှတွင် နံပါတ် (၁) နေရာရှိခဲ့ရာမှ ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်း၍ အဆင့်လျော့ကျလာ ဟု?
မုန်းချောင်းရေ တိုက်စားမှုကြောင့် ကမ်းပါး ပြိုကျမှုများဖြစ်ပွားနေ၊ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များ